Borg Backup - ကောင်းမွန်သော Backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ Linux မှ
Borg Backup - ကောင်းမွန်သော Backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
todo အသုံးပြုသူတ ဦး တည်းဖြစ်ပါစေ ဘုံ, အဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းမင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် လည်ပတ်မှုစနစ်များ, မွမ်းမံ, ဒါပေမယ့်လည်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မသာ ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပျက်စီးခြင်းများစသဖြင့် အချက်အလက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအရှုံး, သိုလှောင်ရေးမီဒီယာ၌တည်၏။
ဒီနောက်ဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြproblemနာအတွက်, များစွာသောရှိပါတယ် software tools များ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များ / လျှောက်လွှာများ လည်ပတ်မှုစနစ်များ အပေါ်အခြေခံပြီးအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း GNU / Linux များ။ ထိုသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းကိုခေါ် Borg Backup ကိုကောင်းပါတယ် backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်.
ထို့ထက်ကား၊ အရန်ကူးခြင်းများ (သို့) အရန်ကူးခြင်းများ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန ဦး အဆင့်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အခြေအနေသို့သာပြန်သွားပါ»သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက် (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အလုပ်အပါအ ၀ င်) အပါအ ၀ င်၊ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံသဏ္newာန်အသစ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းအသစ်များနှင့်ပုံမှန်ထက် ပိုမို၍ အတွေ့အကြုံရှိသည့် GNU / Linux ဖြန့်ကျက်မှုအသစ်များကိုအစဉ်တစိုက်စမ်းသပ်နေသောကြောင့်၎င်းသည်အသည်းအသန် GNU / Linux အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ။
1.1 Backups နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးမှတ်စု
2 Borg Backup: Backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
2.1 Borg Backup ဆိုတာဘာလဲ။
2.2.1 သော့ချက် features တွေ
2.4 Deduplication ဆိုတာဘာလဲ။
အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်၌တည်၏ FromLinux ဘလော့ ဤအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကရှာဖွေပြီးဖတ်ရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှနမူနာအချို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Resetter: Debian / Ubuntu အခြေပြု Distros များကိုမည်သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်နည်း။
Rescuezilla 1.0.5.1: မတ်လ 2020 မှရရှိနိုင်သောမူကွဲအသစ်
Systemback: Backup၊ System Restore နှင့်အခြားများစွာရှိပါသည်
Shell Scripting ကို သုံး၍ ကိရိယာများတွင်ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
အခြား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်သောအက်ပ်များဖော်ပြသင့်သောအချက်များမှာ - Deja Dup, ရူပဗေဒနှင့် Aptik.
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက် (အချက်အလက်) နှင့် Operating Systems များကိုကာကွယ်ရန်အရန်ကူးလုပ်ငန်း (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သောအခါများစွာသောအခြားသူများအကြားဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေ့အကျင့်ကောင်းများသည်“ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအလေးထားသည်။၃-၂-၁″လိုက်နာရန်အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူများဖြစ်သောကြောင့်၊
အရန်ကူးထားသည့်အရာအားလုံးအနည်းဆုံး (၃) ခုမိတ္တူကူးထားပါ။
ကွဲပြားသောအတွင်းနေရာများတွင်အနည်းဆုံး (၂) အုပ်မိတ္တူကူးထားပါ။
သင်၏အရန်ကူးခြင်းအနည်းဆုံး (၁) ကိုပြင်ပနေရာတွင်ကာကွယ်ပါ။
Borg Backup: Backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
Borg Backup ဆိုတာဘာလဲ။
Borg Backup ကိုသူတို့ရဲ့အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်,
"deduplication backup အစီအစဉ်။ ဖြစ်နိုင်သည်က၎င်းသည် compression နှင့် authentication encryption များကိုထောက်ပံ့သည်။ သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအချက်အလက်များကိုအရန်ကူးယူရန်ထိရောက်။ လုံခြုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒေတာကုစားနည်းစနစ်သည် Borg ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုသာသိမ်းဆည်းထားသဖြင့်နေ့စဉ်အရံသိမ်းဆည်းမှုများအတွက်သင့်တော်စေသည်။ စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသောစာဝှက်စနစ်ကမယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ်မှတ်များသို့အရန်ကူးရန်အတွက်သင့်တော်သည်".
ထိရောက်သော disk space ကိုသိုလှောင်ခြင်း: သိုလှောင်ထားသော bytes အရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည့် content-definition chunking ကို အခြေခံ၍ deduplication တစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ဖိုင်တစ်ခုစီကို variable-length chunkks အနေဖြင့်ခွဲခြားပြီးဘယ်တုန်းကမှထပ်မထည့်ဖူးသေးသော chunk များကိုသာယခင်မြင်တွေ့ခဲ့သော repository တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ။
အရှိန်ဖြေ။ ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance-critical code ကို C / Cython မှာအကောင်အထည်ဖော်တာ၊ local file / data cache လုပ်တာ၊ မပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ဒေတာ encryptionဖြေ - AES 256-bit encryption ကိုသုံးပြီးအချက်အလက်အားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ HMAC-SHA256 ကိုသုံးပြီးအချက်အလက်ရဲ့သမာဓိနဲ့စစ်မှန်မှုကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးတော့ဒေတာကို client ဘက်မှာစာဝှက်ထားတယ်။
ချုံ့ဒေတာအားလုံး၏ဖိအားပေးမှုကိုအောက်ပါပုံစံများဖြင့်လုပ်နိုင်သည် - lz4 (စူပါအမြန်၊ အနိမ့်ချုံ့မှု)၊ zstd (မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့်အနိမ့်ကျုံ့ခြင်းမှမြင့်မားသောချုံ့ခြင်းနှင့်အနိမ့်မြန်နှုန်းအထိကျယ်ပြန့်စွာ)၊ zlib (အလယ်အလတ်စားမြန်နှုန်းနှင့်ချုံ့ခြင်း) နှင့် lzma (အနိမ့်မြန်နှုန်းမြင့်မားသော compression) ။
ပြင်ပအရန်ကူးခြင်းများSSH မှတဆင့်ရနိုင်သောဝေးလံသောအိမ်ရှင်တိုင်းတွင်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည် ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် backup များကိုဖိုင်စနစ်များအဖြစ်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းများစွာတွင်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်ဖြေ - install လုပ်စရာမလိုပဲ run နှင့်အသုံးပြုရန်မလိုသည့် binaries (installers) များကိုဤပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော Linux, Mac OS X, FreeBSD, Windows 10 Linux Subsystem (စမ်းသပ်မှုပုံစံဖြင့်) ကဲ့သို့သောအရာများ၌ကမ်းလှမ်းသည်။
အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ- ၎င်းကို BSD လိုင်စင် (အပိုဒ် ၃) အရလိုင်စင်ရရှိသည်။
၎င်းသည်ဗားရှင်းနံပါတ် ၁.၁.၁ ကို ဖြတ်၍ သွားနေပြီး၊
Borg 1.0.x မှ 1.1.x သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများပါဝင်သည်
WSL autodetection (Linux အတွက် Windows 10 Subsystem) ကိုဖယ်ရှားသည်။
၎င်းသည် lz4 package ကို version 1.9.2 သို့လည်းကောင်း၊ zstd package ကို version 1.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
os.link မပါသောပလက်ဖောင်းများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်ပါ (ဥပမာ Android နှင့် Termux)
sync_file_range မပါပဲ Linux ပလက်ဖောင်းများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သည်။
မသန်စွမ်း Borg Backup ကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် Terminal (CLI) ဖန်တီးထားသည် ဂရပ်ဖစ် interface များ (GUI) ပိုကောင်းတဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်။ ၎င်းတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် -
Borgweb: Linux အတွက်
Vorta Backup ကိုလိုင်း- Linux၊ MacOS နဲ့ Windows အတွက်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Borgweb y ဗော်တာ သင်သည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် GitHub။ သို့သျောလညျး BorgWeb တစ်ခုရှိပါတယ် အခြားရွေးချယ်စရာ repository ကို နှင့်အခြား သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက် မကြာခင်မှာအဲဒီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးပေးလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်အရန်ကူးခြင်းနည်းပညာဖြစ်သည် မလိုအပ်သောသိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားသည်, အချက်အလက်များ၏တစ်ခုတည်းတူညီမိတ္တူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, နှင့်မလိုအပ်သောမိတ္တူကြောင်းတစ်ခုတည်းမိတ္တူကိုညွှန်ပြထောက်ပြနှင့်အတူအစားထိုး။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနည်းစနစ်သည်ဖိုင်ကိုတစ်ကြိမ်သာသိမ်းဆည်းပြီးအခြားသူများအားထိုဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်ဤမိတ္တူတစ်ခုသို့ညွှန်ပြသည့်အမှတ်အသားဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဒီစနစ်ကရရှိ backups များကသိမ်းပိုက်အာကာသသိမ်းဆည်းပါဤသည်အပြင်, ဒီမီဒီယာနှင့်ဆက်စပ်သောအာကာသနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေ မိတ္တူ (အရန်ကူး) မှပိုမိုမြန်ဆန်သောဒေတာများကိုဆယ်တင်ခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Borg Backup»အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
သို့မဟုတ်ရုံကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်စာမျက်နှာကိုသွားကြည့်ပါ FromLinux သို့မဟုတ်တရားဝင် Channel ကို join DesdeLinux မှကြေးနန်း ဒီသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့စာပမြေားကိုဖတ်ခြင်းနှင့်မဲပေးရန် «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအကြောင်းအရာများ «Informática y la Computación», အ «Actualidad tecnológica».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Borg Backup - ကောင်းမွန်သော Backup စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
AMD နှင့် Samsung - Android တွင်ကစားနည်းတိုးတက်စေရန်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း